Ndiphule i-WordPress 2.1 | Martech Zone
Ndiphule i-WordPress 2.1
NgoLwesine, uJanuwari 25, 2007 Douglas Karr
Kulungile, wonke umntu uyeke ukuhlekisa…. Ndiyazi ukuba lo ngumxholo ongagqibekanga. Endaweni yokuzama 'ukulungisa' umxholo wam wakudala kunye nayo yonke ikhowudi yesiko endiyibeke apho, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyilahle ngokupheleleyo. Ke ndinyamezele okwethutyana xa ndisakha umxholo wam wokuqala weWordPress. Ndiza kugcina lo mxholo mbi ukuze ndizikhuthaze ukuba ndenze umxholo uphume ngokukhawuleza. Ndiqale phezolo!
Ndingayibuyisa imali yam, iWikipedia?
Amaqamza, ukuCamngca- ngoku kukhanya kukuhle!
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-3:42 PM
Umnqweno omhle. Yonke into yandihambela kakuhle, kodwa ndandilindele ingozi. Ndihlala ndikrokrela ukuba kukho into eza kuhamba kakubi xa ndihlaziya i-WordPress, kodwa ukuza kuthi ga ngoku ayikaze ibekho.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-4:20 PM
Kuyenzeka [okanye] ndiyazi ukuba kunjani oko. Ithamsanqa kwaye wonwabele eli thuba lokubuyisela inkangeleko yakho kunye nokuziva kwakho.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-5:05 PM
Isihloko esikhulu seposi 🙂 Amakhonkco emifanekisweni ayeyi-buggy emva kophuculo lwam lwe-WordPress, kodwa kungenjalo intle kakhulu.
Ndiyathemba ukuba umxholo wakho omtsha uya kujongeka umtyibilizi!
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-5:10 PM
Umhle uDoug. Ndiye ndabekela ecaleni uphuculo lweWordPress 2.1 kuba ndinexhala malunga nokubandezeleka okufanayo.
Ndenze imixholo embalwa ye-WordPress kwixesha elidlulileyo, ke zive ukhululekile ukundikhwaza ukuba ufuna naluphi na uncedo ngayo.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-6:00 PM
Ndicinga ukuba umxholo wakho "ohlala uhleli" ukhangeleka kakuhle! Ayibonakali imbi njengoko ucinga. Kwaye ndicinga ukuba usandula ukungqina ukuba nomxholo "omiselweyo" unokujongeka ulungile ngokulungiswa okuthile.
Kodwa, ukuba nomxholo olungiselelweyo dala isazisi-yiloo nto iblogi imalunga nayo kwaye sonke kufuneka sibe nebhlog ejongeka ngokukodwa esinokubonisa ngayo kwihlabathi!
Ndijonge phambili ekuboneni umxholo wakho omtsha.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-6:02 PM
Ndicinga ukuba uthetha icuba, ndiyekile kwiminyaka engama-30 eyadlulayo ndamkela icuba, kodwa andiphefumli.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-6:03 PM
Wow - inkxaso emangalisayo. Enkosi wonke umntu! Ndiyabuthanda ngokwenene ubulula balo mxholo. Ndiza kubona ukuba ndingakwazi na ukudibanisa into elula kumxholo wam - eyam yokugqibela ibixakekile!
Wowu! Lo ngomnye umxholo omhle weWordPress owuqhubayo !!! Ibizwa ntoni? 🙂
Hayi ukuphunga hayi ukutshaya, ndibuye ndaziyeka ii-snickers bar
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-7:14 PM
Ndiyaqonda ngokupheleleyo. I site yam entsha I was ready to go de ndophule umxholo wam ngokunjalo. Ukucinga kancinci kwenze izinto zaba mbi ngakumbi. Kwafuneka ndiyakhe kwakhona. Ngalo lonke ixesha yam yangaphambili-engabhlogi-indawo yayiphantsi. Ngokusisiseko, ndandiphantse ndibe yinyanga ngaphandle kwewebhusayithi. Kwaye ndingumphuhlisi weshishini lewebhu.
NgoJanuwari 25, 2007 ngo-7:20 PM
Hayi ndoda! Ndivele ndabethwa nguJohn Chow! Yhuu!!!
Jan 26, 2007 kwi-5: 44 AM
Ndiyifumana le icoceke kakhulu kunendala. Ndiyathemba ukuba upheka into ecocekileyo nebukekayo.